Maxay dumarku u yihiin hubka qarsoon ee “argagixisada”? | Hangool News
Si ka duwan sidaas, dumarka ka qeyb qaata islamarkaana taageerra xagjirnimada, mararka qaar waxa ay noqdaan kuwa indha xiran, oo la iska indho tiro; arrinkan se wuxuu is baddalay kaddib markii ay Shamima Begum, kasoo baxsatay kooxda Daacish, islamarkaana sheegtay in ay u ahayd “Guri joogto” ugu xabisan xeryaha qaxootiga Syria.
Waxa ay u sheegtay Dowladda Ingiriiska, haddii ay kasoo noqoto argiggixisada, in si wanaagsan loolla dhaqmi doono, islamarkaana ay heli doonto taageero sharci ah, si ay racfaan uga qaadato go’aankii hore; haddaba qarka ayey u saaran tahay in ay taageero sharci ah ka hesho dowladda Ingiriiska si xayiraadda looga qaado.
Lahaanshaha sawirkaMET POLICE
Image captionShamima Begum (MIDIG) waxay la socotaa saaxibadeed iskuulka, Amira Abase iyo Kadiza Sultana, garoonka Gatwick 2015
Arrinta Begum, waxa ay soo shaacbixisay su’aalo fara badan kuwaas oo ku saabsan doorka dumarka iyo ka qeyb qadashada rabshadaha argiggixiso ee ay fuliyaan Daacish iyo kooxaha lamidka ah.
Image captionSally-Anne Jones
waxaa jira sababo badan oo ku riixa dumarka in ay ku biiraan kooxaha argiggixisada, darajooyin, badanaa waxa ay u muuqataa waxyaabaha dhiirageliya ragga in sidoo kale dumarkana ay dhiira geliyaan, waxaana kamid ah aaminnaadda xooggan ee mabdda’ iyo faa’iidooyin dhaqaalle.
” Haddii aan helo nin i gursada, qaadi karana masuuliyadeyda, maxaan nafteyda ugu dhibayaa waxbarasho?” Gabar ardayad ka ah Jaamacadda Nairobi ayaa weydiisay, cilmibaarayaasha.
Waddooyinka dhaqan celinta, waxaa jira habab badan oo dhaqan celineed, oo lagu dabaqo dagaalyahanadii hore ee soo noqday, laakiin dumarku waa ku yaryihiin kuwa ka faa’iideysta.
Dadka dajiya siyaasadaha, hay’adaha ammaanku waa in ay qorshe ka lahaadaan dumarka kasoo noqonaya ururada xagjiriinta ah, haddey ahaan lahayd ka hortagga, dhaqan celinta iyo dhexgalkooda bulshada. Tusaale ahaan, qaar baa laga yaabaa in ay carruuri uga soo dhimatay, ama dagaalyahano ka maqanyihiin, halka qaar u baahan yihiin in loo sameeyo la talin iyo tiiraanyo bixin Kasoo gaartay kufsi loo geysanayo iyo galmo aysan raalli ka ahayn.
Aad bey ugu adagtahay dowladda marka ay la macaamileyso dumarka ku lugta leh falalka argagixisanimo. Waa in arrintaan laga billaabaa in si fiican loo fahmo, kala duwanaanshaha ku saleysan jinsiga, sida uu si gaar ah dumarka ugu saameyn karo noloshooda. Waxey arrintani faa’iido u tahay bulshada, waxeyna yareyneysaa heerka qatarta dumarka ee ah dumarku in ay ku biiraan kooxa xagjiriinta ah.